Dib Isu-habaynta Kooxda Jwxo-shiil iyo Daloolada Degaanka – Rasaasa News
Dib Isu-habaynta Kooxda Jwxo-shiil iyo Daloolada Degaanka
Mar 24, 2012 Dib Isu-habayn ay Wado Kooxda Jwxo-shiil iyo Daloolada Degaanka, Eritrea, ethiopia, ONLF, Somali
Jijiga, Mar 24, 2012 [ras] – Kooxda Jwxo-shiil, oo aan mudo labo sano ah wax dhaqdhaqaaqa samayn, ayaa wada abaabul beerlaxawsi ah oo ay kaga faa,iidaysanayso gol daloolooyinka madaxda dawlada degaanka Somalida Ethiopia.
Nabada ka dhacday degaanka Somalida Ethiopia waxaa lahaa qurbo joogta u dhalatay degaanka Somalida Ethiopia [ogaden] iyo dawlada dhexe oo runtii muujisay dadaal, dib u dhac ku yimaadana dantu waxay ugu jirtaa ururada mucaaradka.
Ujeedada nabadu waxay ahayd in isbadal ka duwan kii hore uga jiray degaanka Somalida Ethiopia oo dhinac walba ah la helo, kaas oo ah furaha soo af jarida hadhaaga ururada mucaaradka.
Runtii wax la qarin karo ma aha in maanta degaanka Somalida Ethiopia, ay ka jirto nabad galiyo wanaagsan. Waxaa kale oo degaanka Somalida ka jira arimo bulsho oo dhibaato leh, kuwaas oo ayna ku faraxsanayn Qurba-joogta u dhalatay degaanka Somalida Ethiopia.
Socdaalkii Madaxweynaha dawlada degaanka Somalida Ethiopia, dadka u badan ee soo dhaweeyey ma hayn quba-joogta degaanka, waxay ahaayeen qurba-joogta dalka Somaliya, kuwaas oo aan saamayn wayn ku yeelan karin isbadalka degaanka Somalida Ethiopia.
Waxaa xaqiiq ah, in dawlada dhexe ee Ethiopia ayna ku faragalin dawlada degaanka Somalida dhinacayada arimaha bulshada iyo maamulka hoose, inkasta oo ay jiraan khubaro kala talisa dhinacyada dhaqaalaha iyo horumarinta. Nabad galiyada iyo siyaasada waxaa si buuxda gacanta ugu haysa dawlada dhexe.
U gacma furaanta arimaha bulshada ee dawlada degaanka Somalida Ethiopia, waxay keenaysa in eedo badan oo ka soo baxa hanaanka dhinaca maamulka in ay qaadato. Arimahaas oo dhanka xumaanta u saamayn kara bulshada iyo ka qayb qaadashadeedadhinacyada nabada iyo horumarinta.
Ciqaabaha aan sababta lahayn iyo eedaynaha aan sal iyo raad toona lahayn ee ku dhaca marar badan dad aan dambi lahayn iyo kala mudnaanta bulshada, qurba-joogta degaanka Somalidu raali kama ah.
Waxaa lagu eedeeyaa dawlada degaanka Somalida Ethiopia, bahdilaad xoog leh oo ay ku samaysayo shakhsiyaadka magaca leh, bahdilaadaas oo lagu qoro bogga ku hadla afka dawlada degaanka ee Cakaara. tusaale ahaan gudoomiyihii ONLF-ta nabada qaadatay oo hogaanka laga tikhaan tikhiyey iyo Ugaas Maxamed Duulane, oo labadoodaba la lafo gaadhay. Labaduba waxay saldhig u ahaayeen nabadii ka dhacda degaanka Somalida Ethiopia.
Waxaad moodaa in dawlada degaanku soo ooday masuuliyiintii ururadii nabada qaatay, oo ahaa kuwa leh magac urur, jecelaana in ay garab galaan nabada iyo horumarinta laga wado degaanka Somalida Ethiopia. In kasta oo baryihii dambe ayna haysan taageero badan, hadan kalsoonidoodu wanaaga ayay kordhinaysay.
Oday dhaqameed la sheegay in lagu badalay gudoomiyihii hore ee ONLF-ta nabada qaadatay ayaa la sheegay in caggaag la diray. Meesha qaar ka mid ah taageerayaashii ururka ay noqdeen wasiiro iyo qaar ku dhaw maamulka degaanka.
Waxaa dhawaan Minneapolis ku kulmay Qurba-joogta degaanka Somalida Ethiopia ee nabada taageertay, waxayna soo saareen muuqaalo ay kaga codsanayaan madaxda dawlada deganaka Somalida siidaynta Ugaas Maxamed Duulane, oo sabab la,aan u xidhan sida ay sheegeen. Qurba-joogtu waxay ku goodiday in wanaag aan laga wada shaqayn cidna wanaag ka sugaynin.
Arimhaas iyo kuwa kale oo aanan koobin ayaa waxay kor u qaadeen niyada kooxda Jwxo-shiil, oo jiritaankeedu uu ku xidhan yahay taageero ay ka hesho qurba-joogta u dhalatay degaanka Somalida Ethiopia [Ogaden].
Waxaa arimahaas laga dareemi karaa dhaqdhaqaaq isbadal doon ah oo ay kooxdu ka wado dhamaan dalalka reer galbeedka. Isbadalka ay kooxdu haatan wado ayaan la garanayn in uu ku kooban yahay ka faa,iidaysiga god daloolada dawlada degaanka Somalida Ethiopia iyo in ay saamayn doonto isbadal maamul oo kooxda dhaxdeeda ah.
Xoghayaha arimaha dibada ee kooxda Maadeey, ayaa kaligii Australia tagay, waxaana uu la kulmay Cadani oo ay in badan saaxiib ahaayeen. Waxaan la is arag mad madow jira awgii duqa mayalka adag ee Maxamed Ismaaciil.
Jwxo-shiil, oo in badan go,doon ahaa ayaa todobaadkan bariiqday, ka dib kolkii uu qaatay door uusan lahayn oo noqdayna tabtii Maxamed Fiid iyo Guba “naagtii gambada taabatay ee gacanta loo maydhay ee galisay meeshii xumayd gabaygu soow maaha.”
Hadii, uu dhaqdhaqaaq kooxda Jwxo-shiil, ku kooban yahay ka faa,iidaysiga daloolada dawlada degaanka Somalida Ethiopia oo kaliya, waxaa suurto gal ah in ayna helin taageero badan, oo mar labaad degaanku ka ceshado qurba joogta, hadii uu is hufo.
Hadiise, ay kooxdu la timaado isbadal maamul oo dhaxdeeda ah, waxaa suurto gal ah in ay soo jiidato dadweyne badan oo aan hore dhana u raacsanayn iyo faa,iido laga helo daloolada dawlada degaanka Somalida Ethiopia.
Runtii masuuliyiinta dawlada degaanka Somalidu waxay maanta u baahan yihiin in ay qurba-joogtu kordhiso taageerada ay u hayso madaxda degaanka, si loo xoojiyo midnimada iyo danta guud.
Arintaas midnimada iyo danta guud ah waxaa muujiyey Cabdulahi Iidoor qoraaga bogga radiojijga.com, oo hore u ahaa qayb caqabada degaanka ah.
Sidaa si la mid ah waxaa laga filayaa madaxda dawlada degaanka Somalida Ethiopia in ay farahooda kor u dhaqaan, oo ayna hoos fiirin.
Nolol waxaynu goob joog u noqon doonaa isbadalka siyaasadeed ee ay la iman doonto bisha August ee fooda inagu soo haysa. Augusto 20, 2012 waa xaqiiq in ay saamayn ku yeelan siyaasada geeska Afrika ee uu degaanka Somalidu ka midka yahay.
Waxaa kale oo aan markhaati u noqon doonaa doorka siyaasadeed ee ay ciyaaraan dawlada degaanka iyo kooxda Jwxo-shiil, oo aad moodo in ay haatan golaha isugu soo hadheen iyo kolba tii ay raacdo qurba-joogta u dhalatay degaanka Somalida Ethiopia.
Madaxwayne Cabdi oo la Kulmay Odayaal dhaqameed ka Socda Hargeysa